Luka Asɛmpa 15:1-32
Oguan a ɔyerae ho mfatoho no (1-7)
Drakma a ɛyerae ho mfatoho no (8-10)
Ɔba a ɔyerae ho mfatoho no (11-32)
15 Na nnipa a wogyigye tow ne nnebɔneyɛfo nyinaa kɔɔ so baa ne nkyɛn betiee no.+ 2 Na Farisifo ne akyerɛwfo no nyinaa kasakasae* sɛ: “Onipa yi gye nnebɔneyɛfo ba ne nkyɛn, na ɔne wɔn didi.” 3 Ɛno nti, ɔmaa wɔn mfatoho yi: 4 “Mo mu hena na ɔwɔ nguan 100, na emu baako yera a, ɔrennyaw 99 no wɔ sare so nkɔhwehwɛ nea wayera no nkosi sɛ obehu no?+ 5 Na sɛ ohu no a, ɔde no to ne kɔn ho, na n’ani gye. 6 Na odu fie a, ɔfrɛfrɛ ne nnamfonom ne ne mpɔtamfo boa ano, na ɔka kyerɛ wɔn sɛ: ‘Mommra mma yennye yɛn ani, efisɛ mahu me guan a ɔyerae no.’+ 7 Mereka akyerɛ mo sɛ, saa ara na anigye pii bɛba ɔsoro wɔ ɔbɔnefo baako a wasakra+ ho sen atreneefo 99 a wonhia adwensakra. 8 “Anaasɛ ɔbea bɛn na ɔwɔ drakma* du, na sɛ drakma baako yera a, ɔrensɔ kanea mpra ne fi na ɔrenhwehwɛ hɔ yiye nkosi sɛ obehu? 9 Na sɛ ohu a, ɔfrɛfrɛ ne nnamfo* ne ne mpɔtamfo boa ano, na ɔka sɛ, ‘Mommra mma yennye yɛn ani, efisɛ mahu me drakma* a ɛyerae no.’ 10 Mereka akyerɛ mo sɛ, sɛ ɔbɔnefo baako sakra a, saa ara na Onyankopɔn abɔfo ani gye.”+ 11 Afei ɔkae sɛ: “Ná ɔbarima bi wɔ mma mmarima baanu. 12 Na akumaa no ka kyerɛɛ ne papa sɛ, ‘Paapa, kyɛ w’agyapade, na fa me de ma me.’ Enti ɔbarima no kyɛɛ n’agyapade mu maa wɔn. 13 Nna kakra bi akyi no, ɔba kumaa no boaboaa ne nneɛma nyinaa ano, na otuu kwan kɔɔ ɔman bi so wɔ akyirikyiri, na ɔkɔbɔɔ ahuhubra de sɛee n’agyapade no nyinaa wɔ hɔ. 14 Bere a ɔsɛee biribiara no, ɔkɔm kɛse bi sii ɔman no mu baabiara, na ne ho kyeree no.* 15 Na otu taree ɔman no muni bi mpo, na ɔde no kɔɔ n’asaase so ma ɔkɔhwɛɛ ne mprako.+ 16 Ná ne kɔn dɔ sɛ obedi aduan a na mprako no redi no bi, nanso obiara amma no hwee. 17 “Bere a n’ani baa ne ho so no, ɔkae sɛ, ‘Me papa apaafo mpo, paanoo abu so ama wɔn mu biara, ɛnna ɔkɔm rekum me wɔ ha yi! 18 Mɛsɔre akɔ me papa nkyɛn akɔka akyerɛ no sɛ: “Paapa, mayɛ bɔne atia Onyankopɔn* ne wo. 19 Memfata sɛ wofrɛ me wo ba bio. Yɛ me w’apaafo no mu baako.”’ 20 Enti ɔsɔree, na ɔkɔɔ ne papa nkyɛn. Bere a ɔda so ara wɔ akyirikyiri no, ne papa huu no na ɔyɛɛ no mmɔbɔ, na otuu mmirika kɔyɛɛ no atuu,* na ofew n’ano. 21 Ɛnna ne ba no ka kyerɛɛ no sɛ, ‘Paapa, mayɛ bɔne atia Onyankopɔn* ne wo.+ Memfata sɛ wofrɛ me wo ba bio.’ 22 Na papa no ka kyerɛɛ ne nkoa no sɛ, ‘Monyɛ ntɛm! momfa ataade tenten a edi mu paa no mmra mmɛhyɛ no, na momfa kawa* nhyɛ ne nsa, na momfa mpaboa nhyɛ ne nan. 23 Na momfa nantwi ba a wadɔ srade no mmra mmekum no, na momma yenni na yennye yɛn ani, 24 efisɛ me ba yi wui, na wasan aba nkwa mu;+ ɔyerae, na yɛahu no.’ Na wofii ase gyee wɔn ani. 25 “Saa bere no, na ne ba panyin no wɔ afuw mu, na bere a ɔreba a ɔbɛn fie no, ɔtee sɛ nnwom ne asaw rekɔ so. 26 Enti ɔfrɛɛ nkoa no baako, na obisaa no nea ɛrekɔ so. 27 Ɔka kyerɛɛ no sɛ, ‘Wo nua no aba, na wo papa akum nantwi ba a wadɔ srade no, efisɛ wasan aba ne nkyɛn, na ɔte apɔw.’* 28 Na ɔba panyin no bo fuwii, na wampɛ sɛ ɔkɔ fie hɔ. Na ne papa pue bae, na ɔsrɛɛ no sɛ ɔmmra mu. 29 Ɔka kyerɛɛ ne papa sɛ, ‘Mfe bebree ni na masom wo, na mimmuu wo mmara baako mpo so da. Nso wommaa me apɔnkye ba mpo da sɛ me ne me nnamfonom mfa nnye yɛn ani. 30 Nanso wo ba a ɔne tuutuufo asɛe* w’agyapade yi bae ara pɛ, woakum nantwi ba a wadɔ srade no ama no.’ 31 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ, ‘Me ba, woatena me nkyɛn bere nyinaa, na me nneɛma nyinaa yɛ wo dea. 32 Nanso gye ara na ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani gye na yedi ahurusi, efisɛ wo nua yi wui, na wasan aba nkwa mu; ɔyerae, na yɛahu no.’”
^ Anaa “nwiinwii.”
^ Anaa “mmea a wɔyɛ ne nnamfo.”
^ Anaa “ehiaa no.”
^ Anaa “ɔsoro.”
^ Nt., “kosoo ne kɔn mu.”
^ Anaa “pɛtea.”
^ Anaa “hwee nyɛɛ no.”
^ Nt., “adi.”